Sakalava - Wikipedia
Ny Sakalava dia vondrom-poko lehibe any amin' ny tapany andrefana sy avaratra-andrefana ary atsimo-andrefan' i Madagasikara. Miainga avy any Ampasimena (avy any avaratra) no manomboka ny faritra nentim-paharazana onenan' ny Sakalava, ka mianatsimo mihazo an' Analalava, Mahajanga, Besalampy, Maintirano, Morondava, Morombe ary Toliara. Ireo foko mifanila vodirindrina aminy kosa dia ny Antakarana any avaratra; ny Tsimihety, ny Merina ary ny Betsileo any atsinanana; ny Bara sy ny Mahafaly any atsimo.
Hita any amin’ ny faritra andrefana sy avaratra-andrefan’ ny Nosy izy ireo, ao anatin' ny tarika iray manamorona ny morontsiraka. Iray amin' ireo foko kely kokoa ny Sakalava, izay mahatratra 6,2 %n' ny mponina manontolo, izany hoe 1 210 000 mahery tamin' ny taona 2014. Ny anaran’ izy ireo dia midika hoe "olona any amin' ny lohasaha lava". Monina amin' ny sisiny andrefan’ ny Nosy izy ireo manomboka any Toliara any atsimo ka hatrany Sambirano any avaratra.
Mizara ho faritra efatra ny vondrom-poko sakalava, dia ireto:
ny Sakalavan' i Boina: renivohitra Mahajanga;
ny Sakalavan' Ambongo: renivohitra Besalampy;
ny Sakalavan' i Menabe: renivohitra Morondava;
ny Sakalavan' i Fiherenana: renivohitra Toliara.
1 Mampiavaka ilay foko
4 Fiarahamonina sy kolontsaina
4.1 Finoana sy fivavahana
4.2 Fiarahamonina sy kolontsaina
6 Boky azo anovozan-kevitra
Mampiavaka ilay foko[hanova | hanova ny fango]
Ny Sakalava dia manondro vondrom-poko vitsivitsy kely kokoa izay nahaforona fanjakana iray taloha, fa tsy vondrom-poko iray manokana. Ny niavian’ ny teny hoe Sakalava sy ny heviny mihitsy dia mbola resabe. Ny fanazavana mahazatra indrindra dia ny dikanteny malagasy amin' ny Sakalava midika hoe "hantsana lava", manondro ny toetran' ny tany somary fisaka any andrefan' i Madagasikara.
Nanomboka nanorim-ponenana teto Madagasikara teo anelanelan' ny taona 400 sy 900 ny Aostrôneziana. Tonga tamin’ ny sambo izy ireo ary avy amin’ ny vondron’ olona avy any Azia Atsimo-Atsinanana. Tamin’ ny taonjato faha-8 no nisian’ ny tanàna voamarina voalohany indrindra, tany amin’ ny Nosy Mangabe sy tany amin’ ny lohasahan’ i Mananara. Tonga teto Madagasikara tamin’ ny taonjato faha-9 ireo tantsaha miteny banto, avy any Afrika Andrefana. Araka ny voalazan' i Gwyn Campbell, "ny angon-drakitra momba ny fototarazo marina indrindra hatramin' izao dia manondro fa ny trano fonenana, any amin' ny morontsiraka avaratra-andrefana, dia misy tokantrano 20 fara-fahakeliny, izay nisy olona manodidina ny 500 eo ho eo, na mifangaro fototarazo, na ny antsasany Aostrôneziana ary ny antsasany Afrikana.“ Tonga tany amin' ny faritra avaratr' ny Nosy ireo mpivarotra Soahily, Arabo sy Indiana ary Tamily. Nitombo isa ny andevo afrikanina nampidirina teo amn' ny Nosy teo anelanelan’ ny taonjato faha-15 sy faha-18, indrindra fa tany amin’ ny faritra misy ny Sakalava ankehitriny. Io firohotan’ ny olona isan-karazany io no niteraka ny foko malagasy isan-karazany tamin’ ny tapaky ny taonarivo faha-2. Ny mpivarotra pôrtogey no Eorôpeanina voalohany tonga tamin’ ny taonjato faha-15, narahin’ ny fanjakana eorôpeanina hafa.
Ny fomba noforonin' Andriamisara no nolovain' ny Sakalava. Taorian' ny taona 1610 ny taranany, Andriandahifotsy, no nanitatra ny fahefana nianavaratra, niampita ny reniranon' i Mangoky, nampian' ny fitaovam-piadiana azo tamin' ny alalan' ny varotra andevo. Ny zanany roa lahy, Andriamanetiarivo sy Andriamandisoarivo (antsoina koa hoe Tsimanatona) dia nanitatra hatrany amin' ny faritr' i Tsongay (Mahajanga ankehitriny).
Nanomboka nanitatra ny fahefany tamin’ ny fanaraha-maso ny varotra ireo lehiben’ ny tanàna amorontsiraka samihafa teto amin’ ny Nosy. Tany amin' ireo taona 1650 tany ho any no niforona ireo fanjakana sakalava lehibe voalohany. Nanjaka tamin' ireo faritra andrefana amin' ny faritra avaratra-andrefan' i Madagasikara izy ireo nandritra ireo taona 1700. Anisan' izany ny lehiben' ny Sakalava tao Menabe, izay fantatra tamin'ny anarana hoe Andakabe, izay tanànan' i Morondava ankehitriny. Niitatra nanerana ny faritanin’ Antsiranana sy ny Mahajanga ary Toliara ankehitriny ny herin’ ny Sakalava. Ny Fanjakana Sakalava dia nahatratra ny fara tampon' ny fiitarany ara-jeôgrafika teo anelanelan' ny taona 1730-1760, tamin' ny andron' ny mpanjaka Andrianinevenarivo.
Araka ny lovantsofina dia andriana maroserana avy any Fiherenana (Toliara ankehitriny) no mpanorina ny Fanjakana Sakalava. Mety ho avy amin' ny foko Zafiraminia avy any amin' ny faritra atsimo-andrefan' ny Nosy ihany koa izy ireo, angamba avy amin' ny Arabo.
Ny fitadiavana andevo nilain' ireo Arabo omany izay nifehy ny fvarotra andevo tao Zanzibar, ary taty aoriana ny Eorôpeana mpivarotra andevo, no nitarika ny fanafihana andevo sy ny fanaraha-maso ny seranan-tsambo lehibe tany amin' ireo faritra avaratra sy avaratra-andrefan' i Madagasikara. Tamin' ny voalohany dia ny Arabo no namatsy fitaovam-piadiana ny Sakalava ho takalon' ny andevo. Ireo andevo ireo dia azo tamin' ny fanafihana andevo tany Kômôro sy tany amin' ireo tanàna hafa amorontsiraka eto Madagasikara, ary koa avy tamin' ny sambo mpivarotra tonga avy any amin' ny morontsiraka soahily atsy Afrika. Vetivety dia nofehezin’ ny Fanjakana Sakalava ny faritra mifanolo-bodirindrina ao amin’ ny faritra Mahafaly, nanomboka tamin' ireo faritra atsimo.
Ny lovantsofin' ny Merina sy ny tahirin-kevitra ao Kômôro dia milaza ny andiam-panafihana isan-taona nataon' ireo mpanafika andevo avy any an-tSakalava nanafika ny tanànana kômôriana hatramin' ny faran' ny taonjato faha-18. Nanampy izay fanafihana izany ny basy azo tamin' ny Arabo, fitaovam-piadiana izay tsy nananan' ny tao Kômôro sy ny Merina. Ny seranan-tsambo lehibe indrindra sy iray amin' ireo tena ankafizin' ny mpivarotra andevo eto Madagasikara dia ny tanànan' i Mahajanga amin' ny morontsiraka sakalava. Nanao ampihimamba ny varotra andevo teto Madagasikara ny Sakalava hatramin’ ny faran’ ny taonjato faha-18. Na dia kely aza ny isan' ny mponina, ny fitaovam-piadiany dia nahafahan' izy ireo nivelatra sy natanjaka, ka nahafahan' izy ireo nanery ireo foko hafa be mponina mba handoa hetra amn ' izy ireo tamin' ny taonjato faha-18.
Nividy basy ny mpanjaka merina Radama I tamin’ ny faramparan’ ny taonjato faha-18, nanomboka ny ady tamin’ ny Sakalava, izay namarana ny fanjakazakan' ny Sakalava sy ny fanafihany andevo. Naverin' ny Merina avy eo ny fanandevozana natrehin' ny vahoakany, ary nanomboka namatsy andevo. Na dia tsy nampidirin’ ny Merina na oviana na oviana tao amin' ny tany feheziny i Menabe sy i Boina (Mahajanga), ny Sakalava dia tsy nandrahona intsony ny afovoan-tany, izay nijanona teo ambany fifehezan' ny Merina mandra-pahatongan’ ny fanjanahantany frantsay, tamin' ny taona 1896, zato taona taty aoriana.
Ny fizotry ny fiforonan' ny Fanjakana Sakalava dia manazava ny fahasamihafan' ny mponina ao aminy, izay mbola mitazona hatrany ny fomba amam-panao isam-paritra, na ara-kolontsaina na ara-piteny. Momba ity farany, ny hany tena mampiray ireo fitenim-paritra sakalava samy hafa dia ny maha-isan' ny vondrona andrefana amin' ny fitenim-paritra malagasy ianjadian' ny herin' ny fiteny avy any Afrika, izay mamîavaka azy ireo amin' ny fiteny malagasy any amin' ny fiteny ao afovoan-tany sy amin' ny morontsiraka atsinanana eto amin' ny Nosy, izay tena aostrôneziana (malaiô-pôlineziana) fiteny.
Miely patrana ny mponina Sakalava, maherin’ ny 128 000 km2 ao anaty tandavan-tany amorontsiraka manomboka any amin’ ny onin’ i Onilahy any atsimo-andrefana ka hatrany Nosy Be any avaratra. Ireo mponina ireo dia miavaka noho ny fiompiany andian’ omby sahala amin’ izay hita atsy Afrika, izay tsy fahita firy any amin’ ny faritra hafa sy ao afovoan-tany eto amin' ny Nosy.
Fiarahamonina sy kolontsaina[hanova | hanova ny fango]
Finoana sy fivavahana[hanova | hanova ny fango]
Ny fivavahana nentin-drazana nataon' ny Sakalava, antsoina hoe fomba gasy, dia nifantoka tamin' ny fivavahana amin' ny razamben' ny mpanjaka, nampian' ny taranaky dady niaro ny sisa tavela tamin' ireo mpitondra efa nodimandry. Nanao lanonana antsoina hoe tromba ireo dady, izay nandratan' izy ireo ny fanahin' ny razana ary nampita ny tenin' izy ireo tamin' ny Sakalava.
Tonga tao amin' ny Sakalava niaraka tamin’ ireo mpivarotra Arabo ny finoana silamo. Noraisin’ ny mpitondra sakalava tamin’ ny taonjato faha-18 izany, mba hahazoany fanohanana ara-tafika avy amin’ ireo Soltanata omany sy avy any Zanzibar, satria nitombo ny herin’ ny Merina sy ny an' ny Eorôpeanina mpivarotra. Betsaka ny isan-jaton' ny Sakalava niova finoana silamo tamin' ny andron' Andriantsoly, sady nanohy ny fombam-pivavahana nentin-drazana toy ny fanompoam-pivavahana amin' ny fanahy.
Tonga teo amin’ ny Sakalava niaraka tamin’ ireo mpivarotra eorôpeanina ny fivavahana kristianina. Tany am-piandohan’ ny taonjato faha-19 dia nitady fanohanana ara-tafika tamin’ ireo firenena eorôpeana mpanjana-tany ny Sakalava mba tsy hisakanany ny fandrosoan' ny Fanjakana Merina mankany aminy. Tonga teny amin’ ny seranan-tsambon’ ny Sakalava ny tafika frantsay notarihin’ ny kapiteny Passot, niaraka tamin’ ireo misiônera katôlika sy zezoita. Ny tanàna silamon' i Nosy Be no lasa toeram-piaingan' ny misiôna nampanaovina azy ireo, ary tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-20 dia efa betsaka ny fiangonana katôlika naorina tao amin'ny faritr' i Sakalava. Niezaka hahazo ny fon' ny Sakalava ny Prôtestanta, saingy noho ny fankahalan' ny mpanjaka sakalava silamo ny andriana merina prôtestanta, ary koa noho ny fandavan' ny Sakalava tsy hiala amin' ny fanaony mahazatra toy ny fanompoam-pivavahana amin' ny fanahin' ny mpanjaka, indrindra fa ny tromba, no nahatonga ny Sakalava hanohy ny fivavahana silamo sy katôlika.
Fomba mampiavaka manan-tantara ho an' ny vahoaka sakalava ny tromba, ary izany fomba izany dia nifantoka amin' ny lanonana sy filaharana ho an' ny fanahin' ny mpanjaka efa maty. Tsy hetsika ara-pivavahana ihany ny filaharana, fa endrika fankalazana ny fiarahamonina sy fetibe hanamafisana ny maha izy azy ny Sakalava. Hita amin' ny foko any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara koa ny tromba, saingy amin' ny Sakalava dia nanana fifandraisana naharitra ela sy tohanan' ireo tarana-mpanjaka izy, izay nifandimby nanohy ny fanao sy ny maha-zava-dehibe azy.
Sarangam-piarahamonina[hanova | hanova ny fango]
Ny fiarahamonina sakalava dia nanjary nizarazara ara-tsôsialy, toy ny foko maro hafa, tamin' ny fiandohan' ny fanandevozana. Ny rafi-piarahamonina sakalava dia nifototra tamin' ny fahadiovan' ny saranga tsirairay. Tao amin' ny Fanjakana Sakalava, ny saranga dia nahitana ny Ampanjaka, sy ny Makoa, izay taranaky ny andevo afrikanina.
Fivelomana[hanova | hanova ny fango]
Mpiandry omby ny Sakalava, ary ny omby dia avela hiraoka ahitra malalaka eny amin’ ny faritra avaratra-andrefan’ izy ireo. Tsy toy ny Merina sy ny Betsileo any afovoan-tany izay lasa mpamboly vary namokatra be, fa ny faritry ny morontsiraka sy ny lohasaha sakalava dia anaovabna fambolena voafetra. Na izany aza, eto Madagasikara ankehitriny, ireo mpifindra monina dia nanitatra ny toeram-pambolena sy fiompiana any amin' ireo faritany avaratra-andrefana.
Ny fiavian'ny Sakalava Boeny ao amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina Archived Jiona 30, 2017 at the Wayback Machine
Raymond Knezevich Kent, Early kingdoms in Madagascar and the birth of the Sakalava empire : 1500-1700, UMI, Ann Arbor (Mich.), 1999, 548 p. (thèse)
William J. G. Gardenier, Witchcraft and sorcery in a pastoral society : the Central Sakalava of West Madagascar, UMI, Ann Arbor (Mich.), 1999, 203 p.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakalava&oldid=1043712"
Voaova farany tamin'ny 9 Febroary 2022 amin'ny 08:01 ity pejy ity.